होन्डा बाइक कसरी खरिद गर्ने ? - Onlinenews7
होन्डा बाइक कसरी खरिद गर्ने ?
अटो अशोज १९, २०७७
काठमाडौं– होन्डाका विशेषगरी कम मूल्यका साइन र युनिकर्न मोटरसाइकल र डियो, एभिएटर लगायत स्कुटर धेरै ग्राहकको रोजाइमा पर्छन्। होन्डाको आधिकारिक वितरक स्याकार ट्रेडिङले ग्राहकलाई सवारी किन्न सहज होस् भनेर विभिन्न योजनाहरू ल्याइरहेको हुन्छ।
त्यस्तै ग्राहकले काठमाडौंमा घर भएको एकजना जमानी राख्नु पर्छ। उक्त जमानीको आफ्नो नाममा घर नभए जसको नाममा छ उसँगको नाता खुल्ने कागज ल्याउनु पर्छ। जमानीको पनि एउटा फोटो र घरको पानी वा बिजुलीको बिल लैजानु पर्छ।यदि ग्राहकको काठमाडौंमा आफ्नै परिवारको घर भए परिवारका अन्य सदस्य पनि जमानी बस्न सक्नेछन्।
ग्राहकले एकवर्षदेखि काम गरिरहेको ठाउँको तलबको कागजपत्र (स्यालरी सिट)।
सवारीको मूल्य बराबरको ‘पोस्ट डेटेड चेक’। यो भनेको ग्राहकको खाताको चेकमा सवारीको मूल्य कति हो, त्यही अनुसार रकम लेखी हस्ताक्षर गरेर कम्पनीलाई बुझाउने हो। यसमा खातामा पैसा हुनैपर्छ भन्ने छैन र उक्त रकम खातामा भए पनि कम्पनीलेलिँदैन। यदि कुनै ग्राहकले बेइमानी गरिहाले उक्त चेकमार्फत् कम्पनीले सम्पर्क गर्न ‘पोस्ट डेटेड चेक’ खोजेको हो।
Previous Postप्रभुका ग्राहकले सिधै खल्तीमा पैसा लोड गर्न सक्ने
Next Postसहारा विकास बैंकको सेयर कारोबार रोक्का